ီမရေးဖြစ်လိုက်သော ရိုက် ကွင်းအနားက ဖြစ်ရပ်များ..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story »ီမရေးဖြစ်လိုက်သော ရိုက် ကွင်းအနားက ဖြစ်ရပ်များ..။
ီမရေးဖြစ်လိုက်သော ရိုက် ကွင်းအနားက ဖြစ်ရပ်များ..။
Posted by နေ ဘုန်းလျံ on Dec 8, 2010 in Short Story | 11 comments
ကိုရဲ ဟာ မကြည်ပြာနှင့်ချစ်ခြင်းနဂ္ဂတ စ်များဝထ္တုနဲ့ ကိုရဲဆိုတဲ့ စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်..။ သို့သော် မကွယ်လွန်ခင်စာအုပ်ပေါင်း၁၃အုပ်ကျော်ကိုရေးသားခဲ့ပြီး မရေးဖြစ်ဘဲကွယ်လွန်ခဲ့တာ ကြောင့်ရေးရန်စီစဉ်ထားသော ဇတ်ကွက်များ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရလေပြီ…။သူရဲ့အကျင့်တခုက စာမရေးခင်ဇတ်ကြောင်း ကိုပြောပြ ဂရန်းရိုင်ရယ်နှင့်ဇိမ်ခံပြီး လန်ဒန်စီးကရက် ကို လက်ဖျား ကမချ အစီ ခံနားကပ်မှ စီးကရက်တို ကိုထောင်ပြီး သောက်ထားသောဆေး လိပ်အစီခံများ အား စာပွဲပေါ်စီထားလေ့ရှိသည်။ ရိုက်ကွင်းများတွင် ဇတ်လမ်းကို ပေါ်လွင်စေရန် တခါတလေ ရိုက်ကွင်းသို့ဒါရိုက် မှခေါ်သွားလေ့ရှိသည်..။ ရိုက်ရင်း ဇတ်ညွှန်းရေးတာမျိုးလဲရှိပါသည်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၂ပတ်မှ၃ ပတ်ကျော်အောင်မည်သူမှရိုက်လေ့မရှိပါ စရိတ်များသောကြောင့်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်..။တနေ့တွင် ဇတ်ကားရိုက်ရန်အတွက် ချောင်းသာသို့သွားကြလေ၏ ။နာမည်ကြီးမင်းသားလာသောကြောင့်ချောင်းသာတခွင်မင်း သားကိုကြွေးချင်ကြသောကြောင့် အစားအသောက်များမှာပင်လယ်စာတွေနှင့် အလျှံ အပယ်ရှိနေကြပါသည် မင်းသား၏မိန်းမမှ မစားခိုင်း သဖြင့်ဇတ်ပို့ များမှ ပိုက်ခွေးနမ်းတဲ့အထိပျော်ရွှင်နေကြလေသည်။၎င်း တို့အထဲတွင် အစီအစဉ်ရှိနေသူ ဟာသဇတ်ပို့များမှာစိတ်ကြိုက် အရက်နှင့်ပင်လယ်စာတို့ကို အားရပါးရလွေးကြလေသည် ပြီးတော့ ညရောက်ရင်ဖြေဖြေဖို့ နတ်သမီးလေး တပါးဆင်းသက်ရောက်ခဲ့လေ ပေါ့ ..။ညမှောင် ကြယ်လတွေမဆုံသော ညမှာ အာ မှားလို့တွံတေး သိန်းတန်သီချင်းနဲ့ ……………။ကမ်းခြေလေးဘေး မီးပုံလေးမှာတဖြေးဖြေးမှိန်လာ အမြည်းတွေလဲကုန် ပုလင်းတွေလဲပုံနေပြီ ..ဟေ့ မောင် ဖြူ ငါသွားတော့မယ် မင်းတို့ နောက်မှလိုက် အေ့ …..အေ့…… အင်းအရေးထဲဖိနပ်ကပျောက်နေသေးတယ် တောက်….။အောင် က လည်း မူးရင် ဖိနပ်ခဏခဏပျောက် နေတယ် သွား ညမှောင်နေပြီ ဖိနပ်မလိုတော့ဘူး ..အေး မင်းပြောတာ ဟုတ်ရယ် …အေ့ … အတဲရေး စောင့်နေတာ တူ တယောက် ထဲကျင်း နေရော့ မှာပဲ … တွားမယ်ေ၇ာ်….။ချောင်းသာရဲ့ အလှတွေ အောက် မှာ ယိုင်ထိုးနေတဲ့ ကို အောင် တယောက်ရမ္မက်ဇောတွေဝေပြီး ဘန်ကလိုဆီသို့ဆိုက်မြိုက်စွာရောက် သွားလေတော့ သည်..။ချောင်းသာရဲ့ နတ်သမီးလေးများအကြောင်း မောင်ဖြူတို့မှာ တွေးရင်းကျန်ခဲ့ပြီ…။ အား အမလေးဗျ ဘာကြီးလဲ ဟလုပ်ကြပါဦးကယ်ကြပါဦး ကယ်ကြပါဦးနံပြား ကနေ ၊အီကြာကွေးဖြစ်သွားလို့ဗျ.. ညနက်ကြီးထဲမှာ အသံနက်ကြီး ဟိန်းထွက်လာပြီး မိတ် ကပ်ဆရာဂျော်ရကီး က ကိုအောင် ပဆိုးကို ကိုနောက်မှနေဆွဲပြီး လိုက်ရာ သစ်ငုတ်ဖြင့်ငြိ သဖြင့် ပုဆိုးကွဲ ဂျော်ရကီး၏ လက်ထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။၎င်းအဖြစ်အပျက်ကြောင့် လူတွေ အားလုံးနိုးကာ မောင်ဖြူတို့ လည်း အပြေးအလွှား ကိုအောင်ဆီသို့ အပြေးလေးသွားကြလေသည် ..။ထိုအချိန်ရိုက်ကွင်းမန်နေဂျာမှ အဖြစ်အပျက်အား ထိမ်းသိမ်းရန် ရောက်ရှိပြီး ကိုအောင်အား စတင်စစ်မေးလေတော့သည်..။ အင်းအဲ ..ဟိုဟို သူသူ ဘာဘာဘာ ……။ဟေ့ကောင်းကောင်းပြောလေကွာ ဘာမှ ကိုတို့က နးမလည်တော့ဘူး ဟု မန်နေဂျာမှ ပြောလေသည်..။ကိုအောင်လဲ အမူးတော်လေးပြေသွားပုံ နှင့် မာမီ ဟို မာမီ မ ကျွန်တော် အိပ်ယာထဲလာအိပ်နေတယ် ပထမတော့ကျွန်တော်နဲ့ချိန်းထားတဲ့ကောင်မလေးမှတ်လို့ အခုတော့ ဘဝရေ တိမ်နစ်တော့မလို..။ ဟယ်…!!!!!!!!!! ကိုအောင်ရယ် လူများတကာကို လူကြားထဲအရှက်ခွဲတယ်ပေါ့ ဟင် သူများကိုဘယ်လိုအမျိုး အစားထဲကမှတ်လို့လဲ ရှင်ဘဲ ချိန်းတယ် ဒီစာနဲ့လေ ည ဘန်ကလိုကို လာခဲ့ ဆိုလို အခုတော့ မဆော်ကားရတော့တဲ့အပြင် လူတွေပါ သိကုန်ပြီ ရှက်တယ်ရှက်တယ် ရှင် ကိုလုံးဝ မကြေနပ်ဘူး ဟင်းသိမယ် တနေ့… ။ကိုအောင်နဲ့.မောင်ဖြူတို့ အတွေးမှာနတ်သမီးဘယ်လိုလ်ိင် ပြောင်းသွာသည်ကို အစီမစဉ်မကျတွေးတော်ရင်း တကယ်မိန်းကလေးစစ် စစ် ခေါ်ထားသော နတ်သမီး ဘယ်ရောက်သွားသလဲကို တောက်တခေါက် ခေါက် ဖြစ်နေကြတော့သည်..။အဖြစ်ပျက်၏ နောက်ကွယ်တွင် တယာက်သောဘူတယောက်က တိုင်ကွယ်ပြုံးနေသည်…..။ ကိုရဲ ကို သတိရသောကြောင့် ခံစားပြန်ရေးပါသည်…။ ၎င်း အကြောင်း အရာသည် ဝထ္တုတပုဒ် အဖြစ်မဖြစ်တည်ခဲ့ပါ …ပြန်မရတော့သော မိတ်ဆွေတယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်…..။
လောကတွင် အချစ်ဆုံးသော၊တော်သော အနုပညာသမားတွေ ဆုံးရှုံးရတာ နှမြောတယ်
ကိုရဲဆိုတာ နီကိုရဲ ကိုပြောတာလား? ဓါတ်ပုံက နီကိုရဲပုံလား … တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးလို့ …
ဟုတ်ပါတယ် ကိုရဲ မဆုံးခင်က ပုံပါ..။
ဆရာကို သတိရပါတယ်။ ဆရာနဲ့ရင်းနှီးကာစ က ဆရာက အရက်ဖြတ်ထား လို့ အရက်တူတူမသောက်လိုက်ရတာ ပိုရင်နာတယ်။(နောက်တာပါ) ဆရာအရက်ပြန်သောက်တယ်ပြောတုန်းက မယုံသေးဘူး။ သူစာအုပ် (ငတုံးစာအုပ်)မိတ်ဆက်ပွဲ မှာပြန်တွေ့တော့ သူတော်တော်လေး သောက်နေတာ သိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီနေ့ကပွဲမှာလည်းသူမူးနေတယ်..။ နောက် သိပ်မကြာဘူး ဆရာဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားရတာပဲ.။ဆရာသား တော်ကီမန်း လေရောဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး..။ ဆရာနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး….ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေအခုထိနားထဲမှာ မှတ်မိနေတုန်းပဲ..။ ငါက ဘယ်အရာမဆို ခံစစ်ကနေပြီးပဲစဉ်းစားတယ်တဲ့..။ အခုဆရာရော သေမင်းကို ခံစစ်နဲ့ ပဲစဉ်စားခဲ့ပြီ ဆရာရွှေဘုန်းတို့နောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် အရက်ပုလင်းဖက်ပြီးလိုက်သွားပြီပေါ.။
အာဂရေ ကြားရတာတော့ တော်ကီမန်းလေးနဲ့ လေဒီချပ်ပြားကတော့ စာမူရဲ့ရပိုင် ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေရတ်ာလို့ကြား နေရတယ်..။
ဒါဆို ဘယ်သူရသလဲ မူပိုင်ခွင့် …ဟို ကြောင်တဲ့နေရာမှာ ၂ ကောင်မရှိတဲ့ မောင်မျိုး ရသွားတာလား..။
စာတွေရိုက်ရန် ကျန်နေတာ ပိုစ့်မှာတွေ့နေရပါတယ် ကျွန်တေ်ာရဲ့ မြန်မာစာ ရိုက် တဲ့ စကေးနည်းတာကြောင့် သီးခံပေးကြပါရန် ..
ခင်ခင် မင်မင် နေဘုန်းလျှံ
တာရာမင်းဝေနဲ့ နီကိုရဲမရှိတော့ကတည်းက ဝတ္ထှုတောင်မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူး အဲဒီ “ရိုက်ကွင်းပေါ်ကအလွဲများ” တွေကိုကြိုက်လို့ဝယ်ဝယ်ပီးသိမ်းထားတယ် သူတို့ရဲ့စာတွေကရိုးရှင်းပီး နှုးညံ့တယ် မှတ်သားစရာလေးတွေလဲပါတယ်။ ခုဆရာ/ဆရာမတွေများ စာအုပ်ဖတ်ရတာက ဘလူးကားကြည့်ရလောက်ကို တိုးတက်နေပီ
ကြောင်နှစ်ကောင် အကြောင်းကတော့မပြောနဲ့တော့ သားစိုးညီ လေး က ထုတ်
ဝေသူ လုပ်ဖို့ ကိုရဲနဲ သွါး ပြောထားတာလေ အဲဒီ အရင်းရှင် ပေါက်စ က ဝထ္တုပေါင်း ချုပ်ထဲထည့် ပြီး ရောင်း လိုက်တော့ သားစိုးညီနဲ့ မျက်နှာပျက်ရတာပေါ့ ကိုမင်းလူကို သွားတိုင် ပင်တော့ ဥပဒေနဲ့ လုပ် ဖိုပါ ဒါပေမဲ့ နောက် ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်လဲတော့ မသိတော့ပါဘူး…. စာ မူ မူပိုင်ကို ကိုရဲ ရဲ့ အဖေတွေ အမေ တွေ ကဘဲ ရယူနေတယ် လို့ကြားတယ်
Nay phone hlan is crazy that’s why don’t believe him he isaspy,,,,,,,
He isaspdc spy He isaspdc spy///He isaspdc spy
စာဖတ်သူတွေကို … သိပ်လည်းမျက်စိလှည့်၊ မျက်လှည့်ပြမနေပါနဲ့ဗျာ..။
အက်ဒ်မင်က… အိုင်ပီလိပ်စာတွေမြင်နေရတာမို့ ပါ..။